Soomaaliya: Xukuumadda oo Dacwad kusoo oogtay Xildhibaano mucaarad ku ah
Soomaaliya: Xukuumadda oo Dacwad kusoo oogtay Xildhibaano mucaarad ah
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir
MUQDISHO, Soomaaliya - Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir oo maanta Shir Jaraa'id ku qabtey Xafiiskiisa Muqdisho ayaa ka dalbadey aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka in xasaanada laga qaado Xildhibaano uu ku eedeeyey Dowlad Dumis.
Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in baaris lagu sameynayo Xildhibaanada kala ah Xasan Maclin Maxamuud iyo Cabdi Saabir Nuur Shuuriye, oo uu sheegay inay galeen fal-dembiyeed maxkamad lagu horgeynayo.
Labada Xildhibaan ayuu ku eedeeyay Xeer Ilaaliyaha qaran Dumis iyo inay dhaqaale kasoo qaateen dalal shisheeye, oo uusan carabaabin si ay u dumiyaan Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Wuxuu xusay in Hay'adaha amniga ay baaritaan ku samayn doonaan Xildhibaanadan marka xasaanada laga aqaado, kadibna cadaalada la horgeyn doono hadii ay ku cadaato eedaymaha dowlad-dumiska ah.
"Waxaan hay'adaha baarista dowladda ku wargelinayaa inay qabsadaan howlahooda ku aadan hergelinta sareynta sharciga, oo baari ku sameeyeen Xildhibaanada," ayuu yiri Axmed Cali Daahir oo warbaahinta la hadlayay.
Xeer Ilaaliyaha ayaa intaasi ku daray in warqad ay u gudbiyeen Gudoonka Gollaha Shacabka ay ku xuseen dhamaan dembiyada lagu soo oogay labada Xildhibaan, oo kusoo kooban dowlad-dumis.
Go'aanka Xeer ilaaliyaha Qaranka ayaa u muuqda mid lagu cabsi gelinayo Xildhibaano mucaarad ku ah Xukuumadda oo ku balamay inay mooshin ka gudbiyaan Farmaajo iyo Khayre marka uu furmi kalfadhiga 3aad ee Gollaha Shacabka. Halkan ka akhri.
Soomaaliya: CC Shakuur oo diiday inuu tago Maxkamadda Racfaanka
Soomaliya 03.01.2018. 10:56
Cabdiraxmaan Cabdishkuur ayaa markale diiday inuu tago Maxkamadda Racfaanka...
Ku-xigeenkii Xeer-ilaaliyaha Soomaaliya oo Muqdisho lagu diley
Soomaliya 20.02.2019. 17:45
Go'aankii lagu fasaxay CC Shakuur oo racfaan laga qaatey
Soomaliya 26.12.2017. 16:08
Xeer Ilaaliye ku xigeenka Soomaaliya oo xilka laga qaadey
Soomaliya 28.12.2017. 23:32
Xildhibaano kulan ka yeeshey hadalkii Xeer ilaaliyaha Soomaaliya ku eedeeyey mudanayaal.
Soomaliya 17.12.2017. 23:37
Soomaaliya: Dib u dhac ku yimid dhageysiga Dacwada CC Shakuur
Soomaliya 27.12.2017. 14:30
Qarax labaad oo ka dhacay Muqdisho iyo faahfaahin laga helayo
Soomaliya 17.04.2019. 15:33
Booliska oo rasaas u adeegsaday kala eryida dibad-baxayaal
Soomaliya 13.04.2019. 14:38
Xukuumada oo albaabadda u furtey wadahadal ay la gasho mucaaradka 23.04.2019. 11:20